Trump oo kordhinaya kharashka gaashaandhigga - BBC News Somali
Image caption Mareykanka ayaa milatariga ku bixiya dhaqaale ka badan kuwa ay ku bixiyaan dalalka kale ee adduunka oo dhan taas oo ku dhaw 600 bilyan oo doolar
Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa doonaya in uu 10% kordhiyo kharashaadka ku baxa gaashaandhigga, isaga oo soo bandhigay hindisaha qorshihiisa miisaaniyadda sanadka 2018ka.
Tallaabadani ayaa ah muuqaalka guud ee hindisaha miisaaniyadda madaxweyne Trump balse waxa ay si cad u muujinaysaa arrimaha uu muhiimadda siinayo, iyo in ay ka go'antahay in uu fuliyo ballan qaadyadiisii xilliigii uu ku jiray ololaha doorashada ee ahayd in uu xoojiyo milatariga dalkaasi.
Miisaaniyadda gaashaandhigga ayaa hoos u sii dhaceysay tan iyo sanadkii 2010-kii, waxa uuna hadda Trump doonayaa in uu arrintaa wax weyn ka badalo.
Miisaaniyaddaasi ayaa hadda lagu qiyaasaa 482 bilyan oo gini, waxaana saraakiisha aqalka cad ay sheegayaan in madaxweyne Trump uu doonayo 43 bilyan oo gini oo dheeraad ah, taas oo ka dhigan in boqolkiiba toban la kordhiyo miisaaniyadda.
Saraakiisha ayaa sheegaya in dhaqaalahan qayb ahaan laga heli doono dhimista kharashka mashaariicda degaanka iyo deeqihii uu Mareykanka dibadda ku bixin jiray.
Balse aqalka kongareeska ayaaa ah ugu dambeyntii cida go'aanka ka gaari gaari doonta miisaaniyaddani, caadiyanna arrintan ayaa ah mid aad loogu gorgortamo koongareeska gudahiisa, haddana durbaba waxaa loo diyaar garoobayaa dood aad u kulul.
In kabadan 120 askari oo hawl-gab ah ayaa waraaqo u diray xildhibaanada waxa ayna ugu baaqeen in dhaqaalo lagu bixiyo dublamaasiyadda iyo horumarka oo ay sheegeen in ay muhiim u yihiin in colaad laga baaqsado.